Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » New Clinical Investigation Yakatenderwa Kurapwa kweEarly-Stage Parkinson's chirwere
Musi waNdira 13, 2022, Green Valley (Shanghai) Pharmaceuticals Co., Ltd. yeOligomannate (yakatengeswa se“GV-971”), mushonga wekambani wekuvandudza chirwere cheAlzheimer's (AD). Tsamba iyi yairatidza kuti “Chidzidzo Chingaenderere mberi” neongororo yakarongwa yekiriniki mukurapwa kwevarwere vane chirwere cheParkinson’s (PD). Zuva rekushanda reIND ndiDecember 16, 2021.
Sechipiri chechirwere chechirwere chinonzi neurodegenerative mushure meAD, kunyange zvazvo pathogenesis yePD isinganyatsozivikanwi, inowanzotenda kuti chirwere chacho chinosanganiswa ne-α-synuclein aggregation, neuroinflammation, oxidative stress, uye mitochondrial dysfunction. Mumakore achangopfuura, kuwedzera kwehumbowo kwakaratidza kuti gut microbiota inodyidzana zvakanyanya nekuitika kwePD uye kusimudzira.
Kuve mushonga wekutanga wepasi rose weAD unonangana negut-brain axis, GV-971 inoderedza peripheral uye yepakati kuzvimba1 nekugadzirisazve gut microbiota uye kuvharidzira chiyero chisina kujairika chegut microbiota-inotorwa metabolites. Zvichienderana nezvakawanikwa zvakadaro, boka rekutsvagisa kuGreen Valley Research Institute rakaita preclinical research yeGV-971's mhedzisiro paPD zvichibva pane yakajairika pathological mashandiro ezvirwere neurodegenerative uye vakawana kuti mushonga unokwanisa kudzora gut microbiota dysbiosis, kudzvanya α-synuclein. kuungana mudumbu uye muuropi, kuderedza neuroinflammation, kuchengetedza dopaminergic neurons, uye kunatsiridza mota uye isiri-motor zviratidzo.
Muyedzo wepasi rose wepakati-chikamu-II yekiriniki ichave 36-vhiki, yakawanda-pakati, randomized, kaviri-mapofu, placebo-inodzorwa muedzo, inoteverwa ne36-vhiki yakavhurika-label yekuwedzera nguva. Muedzo unoronga kunyoresa varwere ve300 vane PD yepakutanga, uye ichaitwa kuzvipatara zve30 muNorth America neAsia Pacific nzvimbo kuti vaongorore kushanda uye kuchengeteka kweGV-971 mukurapa kwekutanga-danho rePD.
Musi waMbudzi 2, 2019, China's National Medical Products Administration yakabvumidza GV-971 "kurapa kwakapfava-kusvika-pakati nepakati AD nekuvandudza mashandiro enjere", mushure mekukurumidza kuongororwa kwemushonga. Muyedzo wechikamu chechitatu cheGV-971 kuChina wakaitwa muzvipatara makumi matatu nemana zveTier-34 munyika yese muvarwere mazana masere negumi nevasere vane AD. Mhedzisiro yemuyedzo wevhiki ye1 yakaratidza kuti GV-818 yakanga yavandudza zvakanyanya basa rekuziva mune vanyoro-ku-mwero wevarwere veAD, uye yaive yakachengeteka uye yakatenderwa zvakanaka nemhedzisiro inofananidzwa ne placebo36.
Muna Kubvumbi 2020, chikumbiro chepasi rose-yepakati-pakati chikamu-III chekiriniki yeGV-971 chakabvumidzwa neUS FDA. Muyedzo wepasi rose wakazobvumidzwa nemasangano anodzora munyika gumi nematunhu, kusanganisira , Canada, China, Australia, France, Czech nevamwe. Parizvino, nzvimbo dzekiriniki dzinosvika zana nemakumi mashanu nemana munyika idzi dzakavhurwa, nevarwere mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakavhenekwa uye mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakaongororwa. Kutongwa kwakarongerwa kupera muna 10, kuchiteverwa nekutumirwa kwepasi rose kwekushandiswa kwemishonga mitsva.
Kubva payakatangwa, GV-971 yakaverengerwa zvakatevedzana muChina ine mvumo yekiriniki nhungamiro yekurapa chirwere. Izvi zvinosanganisira Nhungamiro yeDiagnostic uye Kurapwa kwechirwere cheAlzheimer (2020 Edition)2 yakaburitswa neNational Health Commission General office iyo inokurudzira GV-971 yekurapa zvinyoro-kusvika-zvine mwero AD, Nyanzvi Consensus paManagement of Post-Stroke Cognitive. Impairment 20213, Nyanzvi Consensus paKupindira Kwekudya kweHutano Hwehutano muAlzheimer's Chirwere4, Mirayiridzo yeKuongororwa uye Kurapwa kweMental Disorders (2020 Edition) 5, White Pepa pamusoro peKuvaka Yakamisikidzwa yeDiagnostic uye Kurapa Centers yeCognitive Disorders6, uye Chinese Guidelines for Dziviriro uye Kurapa kweVakuru Dementia yakaburitswa neChinese Society of Neurology pasi peChinese Medical Association muna Zvita 2021, iyo inonyora GV-971 seKirasi-A inokurudzirwa mushonga une Level-1 humbowo hwekurapa AD. Musi waZvita 3, 2021, GV-971 yakaverengerwa zviri pamutemo paNational Reimbursement Drug List kekutanga.
Sechirwere cheneurodegenerative, PD's main Clinical manifestations zvinosanganisira kuzorora kwekudedera, bradykinesia, myotonia uye postural gait disturbance, iyo inogona kuperekedzwa nezviratidzo zvisiri zvemotokari zvakadai sekuora mwoyo, kuvimbiswa uye kusagadzikana kwekurara. Pamwe chete, vanokanganisa hupenyu hwevarwere nekushanda kwezuva nezuva. Nhamba dzinoratidza kuti kune vanenge mamiriyoni gumi varwere vePD munyika10, kusanganisira mamiriyoni matatu muChina, uye chiyero chekupararira pakati pevanhu vane makore anopfuura 9 ndeye 3% 65. Nepo huwandu hwepasi rose huri kuchembera, huwandu hwevarwere vePD hucharamba huchikura.
Asia Zvinodhaka utano utariri National Health Commission North America tsvakurudzo vanhu
Rubatsiro Rwukuru rweVashandi vekushanyira India pakubviswa kwe...
virgie kubika anoti:
Ndira 20, 2022 pa10: 47
Ini ndiri humbowo mhenyu hwekuti unogona kuporeswa kubva kuchirwere cheAlzheimer. Ndakabatwa nechirwere cheAlzheimer. Ndakaita pneumonia munaKurume wa2020, iyo yakatanga sefuruu ichibva yaita pneumonia. Mushure memazuva angangoita gumi ndakanzwa zvakanaka, asi kufema kwangu kwakange kwakasiyana, zvakaoma kutsanangura, asi zvakaita sekunge mumwe munhu achinja sefa mumapapu angu. Ndakapora zvangu nekushandiswa kwe( World Rehabilitate Clinic, mukati menguva yemavhiki matatu, ndakanga ndava kupora. Muna 10 ndakatanga kuona Dr Gomez Sims, avo vanonyanya kurapa mukati nemapapu ( worldrehabilitateclinic. com).
Ndira 19, 2022 pa19: 35